Wax ka baro umadaha ugu isir ku faanka badan caalamka. | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Wax ka baro umadaha ugu isir ku faanka badan caalamka.
Posted by: radio himilo August 15, 2017
Muqdisho – Falsafadda xun ee dadka gun iyo gob u kala saarta waa dhaqan la kowsaday jiritaanka ina Aadan. Wuxuuna mar walba ahaa caqabad ama furaha mushkiladaha kala xadeeya umadaha dhexdooda.
Previous: Coutinho oo aan ku jirin safka kahor-tagi doona kooxda Hoffenheim
Next: West Ham United oo u dhaqaaqaysa hanashada Danilo Pereira.